Sidee loo miisaaniyaa qaabeynta qaabeynta? | Talooyin iyo Kheyraad | Abuurista khadka tooska ah
Lua louro | | Design Graphic, Khayraadka
Ma jiraan wax ka dhib badan marka aad ka bilawdo adduunka nashqadaynta in aad samayso miisaaniyad. Qof walba waxaan leenahay shaki isku mid ah: Immisa ayaan ku qaadanayaa tan? Iyo taas? Ma waxaan ku dalacayaa wax badan ama aad u yar? Sideen u qoraa miisaaniyada? Maxaan ku xisaabtamayaa markaan samaynayo? Waa maxay qeybaha ay tahay inay lahaato? ...
Qoraalkan waxaad ka heli doontaa qaar talooyin aasaasi ah si aad u bilowdo inaad lumiso cabsidaada sameynta miisaaniyadda waxaanan sidoo kale ku siinaynaa qaar khayraadka (khadka tooska ah) ee kaa caawin doona dhammaan howlahaan: xisaabiyayaashu inay ogaadaan inta laga qaadayo, moodellada miisaaniyadda, barnaamijyada lagu maareeyo qaansheegadkaaga ... Fiiri oo sii wad akhriska!
1 Talooyin aasaasi ah oo ku saabsan sida miisaaniyadda loo sameeyo
2 Kheyraadka kaa caawinaya inaad qorto miisaaniyad
2.1 Ogow inta laga qaadayo:
2.2 Barnaamijyada lagu maareeyo miisaaniyadaha, qaansheegadka, iwm.
Talooyin aasaasi ah oo ku saabsan sida miisaaniyadda loo sameeyo
ka saacadood: Calan qiimo saacaddii aad ku shaqeynayso mashruuc. Ma garanaysid sida loo sameeyo? Waxaan kugula talineynaa inaad sii wado aqrinta maqaalka oo aad ku joojiso qeybta inta lagaa qaadayo.
Qiimaha naqshadeynta kaliya: U cadee macmiilka. Haddii aad rabto in kaararka ganacsiga la daabaco, waa inaad si gooni ah u xisaabisaa waxa ay kugu soo dalacayaan adiga oo daabacaha ah: waxaad iyaga ugu dalacaysaa qaabeyntaada.
Toban tixgeli kharashaadkaaga: Miisaaniyad ahaan waa inaadan qiimeyn oo keliya waxa kaaga baxay (saacadaha shaqada) inaad ku qabato. Maskaxda ku hay inaad sidoo kale bixiso kharashka nalka istuudiyaha, khidmadda iskaa wax u qabso, ruqsadda barnaamijyada naqshadeynta, softiweerka aad isticmaasho (kombiyuutarka) ...
La TuurTirada tirada / nuqulada shaqadaada.
Lacag bixinta kahor: Boqolkiiba marwalba waa lagaa qaadaa hore qiimaha ugu dambeeya.
Shaqadaadu adigaa iska leh: Hantida aqooneed waa mid waligeed ahaan doonta naqshadeeye, kaas oo u xilsaara macmiilka xuquuqda dhiig-miirashada ee aaggii lagu heshiiyey iyo waqti lagu heshiiyey. Taasi waa, waxaad xaq u leedahay inaad ku daabacdo shaqooyinka faylalkaaga.
Kheyraadka kaa caawinaya inaad qorto miisaaniyad
Tusaale qandaraaska naqshadeynta garaafka aasaasiga ah, waxaa sii daayay ADCV
Sample xigasho design caadadii, waxaa sii daayay ADCV
Ogow inta laga qaadayo:
Barnaamijyada lagu maareeyo miisaaniyadaha, qaansheegadka, iwm.
Qaansheegta Tooska ah- Qorshaha tijaabada 30-maalmood, kaas oo u oggolaanaya ugu badnaan 5 dukumiinti iyo 10 kharash. Qiimaha qorshooyinka kaladuwan waa € 9 / bishii, € 99 / bishii ama € 19 / bishii. Tifatiray: xaddidan dukumiinti dheeraad ah
Deyn bixiye: Barnaamijka biilka bilaashka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sida loo qorsheeyo qaabeynta qaabdhismeedka shaxanka | Talooyin iyo Kheyraad
Waxaan kuugu hambalyeynayaa boostada! Waxay waxtar badan leedahay oo loo qaabeeyey si kaamil ah. Hadda waxaan bilaabayaa adduunyada cajiibka ah ee naqshadeynta qaabdhismeedka iskood u shaqeysta (oo laga dheregsan yahay madaxda iyo xafiisyada), wey ila habboon tahay sida gashi gashi
Jawaab Mia Lopez
Ma garanaysid sida aan ugu faraxsanahay inaan ogaado inay waxtar badan lahayd oo aad ka heshay. Waxaan isku dayi doonaa inaan daabaco qoraalo xiisa badan oo kusaabsan iskaa wax u qabso maalinlaha ah: tusaale ahaan, maamulayaasha howsha waxay noqon karaan caawinaad weyn. Salaan Mia!
Waxaan ahay qof raacsan aamin ah ee Creativosonline, laga bilaabo RSS :) Ma seego mid.
Waad ku mahadsantahay digniinta Pol, horeyba waan u tafatiray. Salaan.
Aad ayaan ugu faraxsanahay Qaansheegta Tooska ah, way fududahay in la isticmaalo oo aad xirfad u leh dhinac walba, aad buu u dhameystiran yahay, dhowr jeer ayaan aragnay aniga ahaanna aniga ayaa ugu fiican.
Software Ziclope dijo
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiisaynayso ZFactura. Barnaamij fudud oo biil iyo maarayn loogu sameeyo iskaa wax u qabso iyo shirkado.
Jawaab ku samee Software-ka Ziclope
Salaan !! Waxay sidoo kale ii ahayd wax weyn! Hagaag, waxaan raadinayay maamul bilaash ah iyo barnaamij xisaabeed oo i caawiya! Waxaan isku dayi doonaa Debbitoor, oo waliba bilaash ah oo muuqaal fiican leh! Waxaan aad u jeclaa kalkuleylka iskood u shaqeysta iyo tusaalooyinka! waad ku mahadsantahay wadaagida qalabkan
Jawaab Astrid Rangel
5 Fonts Bilaash ah (VI)
5 Fonts Bilaash ah (V)